မောင်ကြူးရင့် – ထင်ရူးပင်ရိပ် နှစ်ငါးဆယ် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၁၈ ( ၁ ) ဆရာမောင်သာနိုးဘာသာပြန်ဆိုတဲ့ ထင်ရူးပင်ရိပ်နိုင်ငံတကာကဗျာစာအုပ်ဟာ နှစ်ငါးဆယ် တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ရာစုနှစ်နဲ့ပြောရရင် ရာစုနှစ်ဝက်တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ မြန်မာကဗျာ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုသမိုင်းကြောင်းကို လေ့လာ ကြည့်ရင် ဘာသာပြန်ကဗျာရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှပါတယ်။ မြန်မာကဗျာဘာသာပြန်သမိုင်းကို သုတေသနလုပ်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ဒီအပိုင်းကိုချန်လှပ်ခဲ့ပါမယ်။ အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာက ထင်ရူးပင်ရိပ် နှစ်ငါးဆယ်အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ( ၂ ) ဆရာမောင်သာနိုးရဲ့ထင်းရူးပင်ရိပ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ကဗျာဆရာတိုင်း စာပေပညာရှင်တိုင်း ဒိုင်းခနဲသိရမယ့် စကားကတော့ “မြန်မာကဗျာမှာ ” မော်ဒန် ” ဆိုတာမူးလို့ ရှုစရာမရှိဘူး ” ဆိုတဲ့စကားရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကာလမှာ တကယ်လည်းမူးလို့ ရှုစရာမရှိပါဘူး။ အဲဒီကာလမှာ ဥရောပကဗျာက မော်ဒန်ခေတ်ကုန်ပြီး ရှေ့တလှမ်း လှမ်းနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာက ဂန္တဝင်ဥခွံထဲက ဖောက်မထွက်နိုင်သေးပါဘူး။ ဆရာမောင်သာနိုးရဲ့ ထင်းရူးပင်ရိပ်ဟာ ဂန္တဝင်ဥခွံထဲက...
ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ ဒီမိုး ဒီလေ ဒီလှေနဲ့ ဒီလူတွေ … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ညီပုချေ Related posts ကာတွန်း ညီထွေး – ခေတ်သစ် ဝေါဟာရများ (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းနေသူတွေ … (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ လေထဲပျောက်ကုန်ပါဦးမယ်ကွာ …. (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ တွေ့ပြီပေါ့ကွာ … (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ အတိုးနည်းအိမ်ယာမဟုတ်ရပါ (0)
ဥက္ကာကျော် ● ပိုးလမ်းကြီးပေါ်က ငြိမ်းချမ်းရေးကြေညာစာတမ်း (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၈ (က) ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကြေညာစာတမ်းပေါင်း မြောက်များစွာ ထွက်ပေါ် ခဲ့ဘူးပေပြီ။ ကဗျာဆရာတို့ရဲ့ ကဗျာကြေငြာ စာတမ်းများ၊ ပန်းချီဆရာတို့ရဲ့ ပန်းချီကြေညာစာတမ်းများ၊ နိုင်ငံရေးသမားတို့ရဲ့နိုင်ငံရေး ကြေငြာစာတမ်းများ စသည်ဖြင့်။ ထိုထဲတွင်ရုရှားကဗျာဆရာ မာယာကော့ဖ်စကီးတို့ရဲ့ အနာဂတ်ဝါဒကဗျာ ကြေညာစာတမ်းသည် အလွန်ကျော်ကြား လှပေ ၏။ နိုင်ငံရေးကြေငြာစာတမ်းများတွင် ကားလ်မတ်နှင့်အိမ်ဂျယ်တို့၏ ကူမြူနစ်ဝါဒ ကြေညာစာတမ်းသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာသည့် ယနေ့တိုင်မရိုးနိုင်သော ကြေညာစာတမ်း တစ်စောင်ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြေညာစာတမ်းသည် ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာ ပြည် ကုန်းဘောင်ခေတ် လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်...
၈၈ အနှစ် ၂၀ (အခန်းဆက်များ) မောင်ရစ် – ၁၉၈၉ ဇူလိုင် ၁၉ … တခုသော အာဇာနည်နေ့… (မတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာဟူသမျှ တာဝန်အရ ဖီဆန်ကြ) မောင်ရစ် ။ ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၀၈ (မိုးမခပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) (1988 Burma Democracy Uprising – File...
အောင်ကိုကိုလတ် (တမူး) – ဇူလိုင် ၁၉
ဇူလိုင် ၁၉ အောင်ကိုကိုလတ် (တမူး) (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၈ ဇူလိုင် ၁၉ ဟာ ဖွဲဖွဲလေးရွာနေတဲ့ စနေမိုး ဇူလိုင် ၁၉ ဟာ သေနတ်တွေတင်လာတဲ့မိစ္ဆာဂျစ်ကား ဇူလိုင် ၁၉ ဟာ ဂျစ်ကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့စစ်ဖိနပ်တွေ ဇူလိုင် ၁၉ ဟာ အတွင်းဝန်များရုံးထဲက ကံကြမ္မာအစည်းအဝေး ဇူလိုင် ၁၉ ဟာ...
ကာတွန်း ဆွေသား – နေမြဲ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၉ ၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ဆွေသား Related posts ကာတွန်းဆွေသား ● အစည်းအဝေး စနေပြီ (0) ကာတွန်း ဆွေသားရဲ့ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးပဲ့ကိုင်ရှင်ကြီး (0) ကာတွန်း ဆွေသားရဲ့ ယောင်နေသူတွေ … (0) ကာတွန်း ဆွေသားရဲ့...
ကာတွန်း okkw ရဲ့ မအားလပ်သူကြီး …
ကာတွန်း okkw ရဲ့ မအားလပ်သူကြီး … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း OKKW Related posts ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ခေတ်နှစ်ခေတ် (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဘတို့ ဆေးရုံ (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဖျားရှူးနေတယ်...
ထွန်းခိုင်နှင့် ဖဒူ ထွန်းအောင် (Myanmar Now) ● ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်နောက်ကွယ်က ကယားနိုင်ငံရေး (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၈ ကယားပြည်နယ်မှာ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့နေသူတွေဟာ အာဏာရပါတီကို ဝန်းရံခဲ့သူတွေ ဖြစ်နေပါတယ် (လွိုင်ကော်) — ၂ဝ၁၂ ဇူလိုင်လရဲ့တခုသောညသန်းခေါင်အချိန်မှာ စိတ်တူကိုယ်တူရှိကြတဲ့ ကရင်နီလူငယ်တချို့ဟာ လျှို့ ဝှက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတခု လုပ်ဖို့ တိုင်ပင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်...
ဥုံဖွ – “နာဠာဂီရိအား မျက်​ရည်​ခံထိုးခဲ့ရ​သော” (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၈ ဒီ​ကောင်​ကြီးနဲ့​ ရေစက်​ဆုံပဲ ဆုံနိုင်​လွန်းတယ်​။ သူ ​ကျောင်းစ​ရောက်​​ရောက်​ခြင်း သိပ်​မခင်​​သေးဘူး။ အ​ရေး​တော်​ပုံအပြီး သံဃာ​တွေကို “သင်္ကန်းဝတ်​” ဆိုပြီး ​ခေါ်​ဝေါ်သုံးနှုန်းတာကို မ​ကျေနပ်​လို့ မန္တ​လေးသံဃာ​တွေစုပြီး တိုက်​​ဟောင်းထဲမှာ ကန့်​ကွက်​တဲ့အခမ်းအနားကစပြီး အတူတွဲဖြစ်​သွားတာ။ ​ ပွဲ​တွေ စာ​ပေ​ဟော​ပြောပွဲ​တွေ သွား​တော့လဲ အတူတူ၊...
ငြိမ်းချမ်းခဲ့သော နေ့ရက်များသို့ အမည်ရတဲ့စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ Yangon Book Plaza K (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၈ ငြိမ်းချမ်းခဲ့သော နေ့ရက်များသို့ အမည်ရတဲ့စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ ရန်ကုန်မြို့လမ်းမတော်မြို့နယ် သံဈေး ငါး လွှာရှိ Yangon Book Plaza မှာ ဇူလိုင် ၁၉ရက် နေ့လယ် ၂ နာရီကနေ ၅...
မင်းလတ်ရဲခေါင်ရေးသားတဲ့ စနေနေ့သတ်ဖြတ်မှုကြီး စာအုပ် ပြန်လည်ထွက်ရှိ K (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၈ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တကွ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများလုပ်ကြံခံရမှုအကြောင်းကို ကွယ်လွန်သူ စာရေးဆရာကြီး မင်းလတ်ရဲခေါင် ကိုယ်တိုင်သိမီ သမိုင်းမှတ်တမ်းဖွယ်ပြုစုရေးသားထားတဲ့ စနေနေ့သတ်ဖြတ်မှုကြီးစာအုပ် ယဉ်မျိုစာပေ က ပြန်လည်ထုတ်ဝေထားပါတယ်။ စနေနေ့ သတ်ဖြတ်မှုကြီး ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ၊ ဥာဏ်နည်းလှချည့်၊ သနားချစ်က ပိုလိမ့်မယ်၊၊ ခါးပတ်စာကလေးတွေ၊ ထိုသူတို့ကား၊ ဗိုလ်ချုပ်၊...
ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ ဆင်ခြေများတဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်း (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၈၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ညီထွေး Related posts ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ ပြေးမလွတ်တွေ … (0) ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ တက်ကုန်ပြီ …. (0) ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ စီမံကိန်းတွေ … (0) ကာတွန်း...
၇၁ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား အတွင်းဝန်ရုံးမှာ ကျင်းပမယ် K (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၈၊ ၂၀၁၈ (၇၁)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့၊သိမ်ဖြူလမ်း (အောက်အလယ် ဘလောက်ခ်)၊ အနော်ရထာ လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလမ်းကြား၊ အမှတ် ၃၀၀ရှိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တကွ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး လုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့ ၀န်ကြီးများရုံးမှာ ဇူလိုင်၁၉ရက် မနက်...
ကာတွန်း KZZH ရဲ့ အကောင်ကြီးတာလည်း ဖမ်းပါဦး (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၈၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း KZZH Related posts No related posts.
အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ● ရိုးမမြို့ကလေး (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၈၊ ၂၀၁၈ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ နယ်မြေဧရိယာပိုင်နက် အကျယ်ဆုံးတောင်ပေါ်မကျမြေပြန့်မကျ မြို့ကလေးကို လွမ်းသည်။ တောင်ပေါ်ရှုခင်းကြည့်စခန်းမှကြည့်လျှင် တောင်ခိုးဝေဝေတို့ကြား မြူငွေ့များရစ်သိုင်းလို့ ချောင်းကလေးက မြို့ကိုပတ် တောင်တန်း တောင်ကုန်းလေးတွေက မြို့ကိုထွေးပွေ့ထားပြီး တောငွေ့ တောင်ရိပ် သစ်ရိပ် ဝါးရိပ် သဘာဝ အထပ်ထပ် အလိပ်လိပ်နဲ့ မျက်လုံးမှိတ်ဖို့ မေ့သွားလောက်စရာ...
အောင်ငြိမ်းချမ်း၊ ဝင်းနန္ဒာ (Myanmar Now) ● ဒဏ်ရာဗရပွနဲ့ နာဖျားနေတဲ့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၈၊ ၂၀၁၈ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးဂုဏ်သရေ ညှိုးနွမ်းစေတဲ့ ပြဿနာတွေ အများအပြား ရှိနေပါတယ် (ရန်ကုန်) — ကုသမှု ခံယူဖို့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုပါစို့။ ဘယ်ကို ဆက်သွားရမှန်းမသိ ယောင်လည် လည်ဖြစ်နေရင်တော့ သင့်နားကို ဘဲငန်းတွေ...
လင်းသက်ငြိမ် ● ညရဲ့လက်ဆောင် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၁၈ မီးပျက်သွားတဲ့ညတွေကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေါင်းများလှပါပြီ။ ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်သွားတဲ့ခံစားမှုဟာ အများနဲ့ဆို သိပ်မထူးခြား လှပေမယ့် တယောက်တည်းဆို စိမ့်ခနဲခြောက်ခြားသွားရလေ့ရှိတယ်။ အမှောင်ဟာ လူတွေနဲ့သိပ်မတည့်တဲ့အရာလို့ ထင်မိ တယ်။ မှောင်မိုက်သွားတဲ့အချိန်ကျမှ အလင်းရောင်ရဲ့တန်ဖိုးကို တွေးတောဆင်ခြင်မိတော့တယ်။ ဖတ်ဖူးတဲ့ဇာတ်တော် တွေထဲဖတ်ဖူးတဲ့ သူတပါးကို အလင်းပေးလှူတဲ့လူတွေရရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားကို အယ်ဒီဆင် ဘယ်လောက်များရရှိလေလိမ့်မလဲလို့တွေးဖူးတယ်။ အမှောင်ဟာ...
ကာတွန်း လိုင်းလုဏ်ရဲ့ တာဝန်ကိုယ်စီ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း လူကိုနော်ရဲ့ ခုလည်း သူတလူ ငါတမင်းပါပဲ …
ကာတွန်း လူကိုနော်ရဲ့ ခုလည်း သူတလူ ငါတမင်းပါပဲ … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း လူကိုနော် Related posts No related posts.
မင်းကိုနိုင် ● ကော်လီနာရဲ့ ခရာသံ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၁၈ ကိုမင်းကိုနိုင် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှ ပြန်လည်ကူးယူသည်။ လူငယ်တစ်စု ခေါင်းချင်းရိုက် တိုင်ပင်၊ အရေးတကြီး မျက် နှာများဖြင့် ပစ်ကပ်ကားပေါ် စုပြုံ တက်မောင်းထွက်သွားကြသည်။ လူကြီးတွေက စိုးရိမ်။ ‘‘ဘာတွေ မဟုတ်တာ ပေါင်းလုပ်ကြဦးမှာလဲ’’ ဟု ရေရွတ်ကျန်ခဲ့ကြ။ ကားက မြို့ပြင်တစ်နေရာရောက်။...
ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ မိုးပျံလမ်းတွေ ဖောက်တော့မှာပါ …
ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ မိုးပျံလမ်းတွေ ဖောက်တော့မှာပါ … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း မင်းထက်လူ Related posts ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ကြပါ … (0) ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ လျှော်ကြမယ် ဖွပ်ကြမယ် (0) ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ … (0) ကာတွန်း...
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သချာင်္) – ဒီမိုကရေစီစနစ်များ ကျဆုံးခြင်းအကြောင်းများ – ပထမအဆင့် (မိုးမခဘာသာပြန်အခန်းဆက်) ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၁၈ ဟာဘတ်တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပါမောက္ခနှစ်ဦးဖြစ်သော စတီဗင် လီဘစ်စကီ Steven Levitsky နှင့် ဒယ်နီယယ်ဇိဘလပ် Daniel Ziblatt တို့ရေးသားသော How DEMOCRACIES Die စာအုပ်မှ ပထမအခန်း Fateful Alliances ကို...
ဥုံဖွ – “ဗိုက်​ပူ ဆိုသူတ​ယောက်​အ​ကြောင်း” (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၁၈ နှစ်​လုံးထီ​လောင်းကစားမှုနဲ့​ တောင်​ငူ​ထောင်​ထဲ​ရောက်​ခဲ့စဉ်​ကအ​တွေ့အကြုံ​လေး​တွေရယ်​ပါ။ ​ထောင်​ကျတယ်​ဆိုရင်​ ​ယေဘုယျအားဖြင့်​ဆိုးလို့၊ မိုက်​လို့၊အပြစ်​ကျူးလွန်​ကြလို့ကျတယ်​ဆိုပြီး​ တော်​​တော်​များများ လက်​ခံထား​လေ့ရှိကြပါတယ်​။ ​ယေဘုယျအားဖြင့်​ ​မှန်​​ပေမယ့်​ အလုံးစုံ​တော့ မှန်​ကန်​မှုမရှိပါဘူး။ အချုပ်​သားဘ၀က​နေ အမိန်​ချလို့​ ထောင်​ကျအကျဉ်းသားဘ၀ ​ရောက်​သွားပြီဆိုရင်​ အလုပ်​ မလုပ်​ချင်​တဲ့သူ​တွေ၊ ရဲဘက်​စခန်း​တွေ ပို့လိုရှိရင်​ တအား​ဝေးတဲ့​နေရာ​တွေမှာ အပို့မခံချင့်​တဲ့သူ​တွေဟာ​...
ပန်းချီဆရာ၊ ပါဖောမန့်သမား မိုးစက်ရဲ့ If I say it’s True Seven Times / ခုနစ်ကြိမ် ခုနစ်လီ အမှန်အတိုင်း ပြောပြရရင် အမည်ရတဲ့ တကိုယ်တော်ပြပွဲ K (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၁၈ If I say it’s True Seven Times...
ပန်းချီဆရာ ဦးမာလာရဲ့ Shades of Art, Colours of Inspiration exhibition –3 အမည်ရတဲ့ ပန်းချီပြပွဲ အမျိုးသားပြတိုက်မှာ ပြုလုပ်မယ် K (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၁၈ မန္တလေးအခြေစိုက် ပန်းချီဆရာကြီး ဦးမာလာရဲ့ခေတ်စုံအလှစုံ ပန်းချီပြပွဲ၊ Shades of Art, Colours of Inspiration...
အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ● စာဖတ်ခိုင်းကြရုံပဲလား (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၁၈ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်းတွင် မဂ္ဂဇင်း ဂျာနယ်များ အတော်များများ ရပ်နားသွားကြပြီဖြစ်သည်။ မဂ္ဂဇင်းများ ဂျာနယ်များ နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများကိုအကြောင်းပြုကာ အသက်မွေးဝမ်းပြုပြီး ရပ်တည်နေရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ သားများနှင့် နောက်ကွယ်မှ မိသားစုဘဝများစွာလည်း ရှိနေပါသေးသည်။ အကြမ်းအားဖြင့် လေ့လာကြည်မည်ဆိုလျှင် စက္ကူစက်ရုံနှင့် စက္ကူတင်သွင်းသူ၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူ...
ကျော်ထင် ● သားကို ​ကျောင်းထားရတဲ့အခါ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၁၈ (၁) ဒီ​နေ့ ​သားကို ကျောင်းသွားအပ်​ရမှာမို့ သူ့အ​မေက ထမင်းဟင်း​တွေ ​ စော​စောထချက်​​နေတယ်​။ နိုးတဝက်​မှာ မီးဖိုထဲက အသံ​တွေ…အိုးသံ၊ ခွက်​သံ၊ ဇွန်းသံ၊​ ဆေး​ကြောသံ​တွေ …ဒီအသံ​တွေကို ကျ​နော်​ ကြား​နေတယ်​။​​ ယောက်ျား​ရေ ..​ တော်​ နိုးရင်​လည်း...
ကာတွန်း ATH ရဲ့ သေမင်းတမန် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
မောင်ရစ် – အတိတ်ကို ပြန်မလှန်ကြေး (ခင်ညွန့်၊ ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာ အာဏာသိမ်းပြီးစ) ၈၈ အနှစ် ၂၀ (အခန်းဆက်များ) (မိုးမခပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) ၂၀၀၈ ဇူလိုင်လ ၈၈ အနှစ် ၂၀ ကို ကောက်နုတ်ချက်တွေ၊ စာတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေချည်းပဲ လိုက်ရှာ၊ လိုက်တောင်းပြီး ကိုယ်တိုင်တော့ မရေးသေးဘူး ဆိုပြီး တရွတ်ဆွဲနေတာ နည်းနည်းတော့...
အောင်ဝေး –ပေါ က် စို့ 
From Than Htay Maung’s facebook အောင်ဝေး –ပေါ က် စို့(မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၁၈ (၁) မနေ့ တစ်နေ့က တောဝက်ကလေး ၁၃ ကောင် ဂူထဲက ထွက်လာတယ်။(၂) ဒီနေ့ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ခြင်္သေ့ ၃ ကောင်...
Page 1 of 90912345...909»